Maya Magazine: December 2007
ကိုပေါ်ဦးသက်ကို ကျနော်တို့ လူထုသတင်းစာတိုက်မှာ သူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံနေရသူတွေ အားလုံးက "ကိုပေါ်" လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျနော်လို သူ့အောက် အသက်အတော်ငယ်တဲ့ လူကဆိုရင် "ခင်ဗျား"ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအစား ကိုပေါ်လို့ပဲ သုံးနှုန်းပါတယ်။ ဗမာစကားမှာ ခင်ဗျားနဲ့ မင်းအပြင် လူပုဂ္ဂိုလ် အနေအထားအလိုက်လို့ သုံးနှုန်းရတယ်ဆိုတာကို တခြားလူမျိုးတွေကို ရှင်းပြရတာ အတော်ခက်မှန်း ကိုယ်တိုင်က သူများကို ဗမာစကားသင်ပေးတော့မှ ပိုသဘောပေါက် လာပါတယ်။ တပည့်တွေက ကိုယ့်ကို "ဆရာ-ခင်ဗျားထမင်းစားပြီးပြီလား" မေးတတ်လို့ ကိုယ်က ဆရာနဲ့ ပြောတဲ့အခါ ခင်ဗျားလို့မသုံးရဘူးလို့ ရှင်းပြလိုက်ရင် သူတို့ အတော်ခေါင်းရှုပ်သွားတာ တွေ့ရတတ်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျနော့်အရွယ်က ကိုပေါ်ဦးသက်ကို ခင်ဗျား ကျနော် မသုံးသင့်ဘူးထင်လို့ ကိုပေါ် နဲ့ ကျနော် လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ သူနဲ့ အသက်က အများကြီး ကွာလေတော့ သူလူထုတိုက်ကိုရောက်လာမှ ကျနော်က သူ့ကို မြင်ဖူးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ပထမဆုံး သတိထားမိတာကတော့ မန္တလေးမြို့ တည် နှစ်တရာပြည့် ပွဲတော်ကြီးမှာ ပြထားတဲ့ သူ့ပန်းချီကားတွေကို တွေ့မိရင်း လေးစားမိတာပါ။ ကျနော့်အမေက သူဆွဲတဲ့(ဆရာ) မြို့မငြိမ်းရဲ့ပုံ ရေဆေးကားလေးကို ၀ယ်လာတာ မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်ဟာ ပန်းချီကားတွေကို တကယ်တမ်း ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ အသက်အလွန်ငယ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေက သူ့လက်ရာလေးကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြောကြတာကြောင့် ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတာပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီပုံကလေးကိုလည်း ကျနော်တို့အိမ်က ဧည့်ခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားတာဖြစ်လို့။
သူ့ကို ကျနော်စတွေ့တာက တနေ့လည်၊ ကျနော့အမေရဲ့ စာရေးစပွဲရှေ့မှာ ထိုင်လျက် ပြုံးနေတဲ့ ကိုပေါ် အဖြစ်နဲ့ပါ။ အဲဒီမှာ အမေက ကျနော့ကို "ငါ့သား၊ ဒါကိုပေါ်ဦးသက်လေ"၊ သူ့ကိုတော့ "အဒေါ့်သား ဖိုးသံချောင်း"လို့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်အထင်ကြီးတဲ့ လူတယောက်နဲ့ ပက်ပင်း ပါ တွေ့ရသူတို့ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ၀မ်းသာသွားတာပေါ့။ သူကတော့ နောင်မှာ အမြဲတွေ့နေရမဲ့ သွား ၃၂ ချောင်းဖော်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ကြည်လင်တဲ့ အပြုံးနဲ့ ခေါင်းတချက်ငြိတ်ပီး ပြန်ပြုံးပါတယ်။ ၁၉၅၉-၆၀ လောက်ဆီက ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောင်မှာ အနုပညာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကျနော့်စဉ်းစားနည်း တွေ အပေါ် အများကြီး သြဇာညောင်းမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ကျနော့်ဘ၀ထဲ ၀င်လာတာပါပဲ။ လူထုတိုက်က ထုတ်တဲ့ သတင်းစာနဲ့ စာအုပ်တွေမှာ ပေါ်ဦးသက်-၀င်းဖေ ဆိုပြီး ပန်းချီနဲ့ကာတွန်း ဆရာနှစ်ဦး ပေါ်လာတာဟာ ပေါ်ကာစက သာမန်ကာလျှံကာကိစ္စလို့ အောက်မေ့စရာ ရှိပေမယ့် အခုပြန် ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဒါဟာ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေ အများကြီးဆောင်တယ်ဆိုတာ တွေ့လာရပါတယ်။ ကိုဝင်းဖေ ရောက်လာတာဟာ ကိုပေါ်ဦးထက် လအချို့ နောက်ကျတယ်လို့ မှတ်မိနေပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကာတွန်းတွေဟာ လိုင်း(ဆွဲပုံဆွဲနည်း) အရရော၊ အိုင်ဒီယာလို့ ပြောလေ့ရှိကြတဲ့ အကြောင်းအရာပိုင်းမှာပါ သူတို့အရင်က ဆရာကြီးတွေနဲ့ ကွဲလာတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ တနည်းပြောရရင် လမ်းသစ်တွေ ထွင်ပေး၊ တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မှန်တာပြောရရင် သူတို့ မတိုင်မီ ဗမာပြည်ကာတွန်းလောကမှာ အများစုကြီးဟာ ဆရာရွှေတလေးနဲ့ ဆရာဦးဘဂျမ်းတို့ ဖောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကိုသာ လျှောက်နေကြတာပါ။ ကိုပေါ်ဦးနဲ့ ကိုဝင်းဖေတို့ လက်ရာတွေ ပေါ်လာတော့ ဗမာပြည် ကာတွန်းထမင်းပွဲကြီးမှာ ဟင်းအမယ်တွေပိုစုံ၊ ပိုစားချင့်စဖွယ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကာတွန်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအကြားမှာ သိသိသာသာ ဂယက်ရိုက်ခတ်သွားပါတယ်။ ဒီနေ့အခါမှာတော့ သူတို့ခင်း တဲ့ လမ်းကိုလျှောက်နေတဲ့ ကာတွန်းဆရာတွေမှ အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ နေ့ခင်းနှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက်မှာ လူထုတိုက်ကို ရောက်လာလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရောက်လာရင် သူတို့ ပထမဆုံးလုပ်တာဟာ အဲဒီနေ့ထုတ် ရန်ကုန်-မန္တလေးသတင်းစာတွေ အားလုံးကို လှန်ကြည့်တာပါပဲ။ သူတို့နှစ်ဦး အစကတော့ အယ်ဒီတာခန်းထဲမှာပဲ ဆွဲကြပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို့အတွက် အကန့်လေးတခု သီးသန့် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီခေတ် ကာတွန်းဆိုတာမျိုးက ဘလောက်လုပ်ပြီးမှ ရိုက်ရတာ။ ဘလောက်လုပ်ရတာလဲ လိုင်းဘလောက် လုပ်ရတာမို့ ဓါတ်ပုံ ဘလောက်ထက် လက်ပိုဝင် အချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကာတွန်းတွေဟာ မျက်နှာဖုံး၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျောဖုံး(သတင်းစာမှာ နောက်ဆုံးမှ ရိုက်တဲ့စာမျက်နှာတွေ)မှာ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပေမယ့် အချိန်အကန့်အသတ် အင်မတန် ကြီးပါတယ်။ သူတို့ ခေါင်းထဲက အိုင်ဒီယာ ထွက်မလာရင် "ကိုသစ်လွင်ကြီး လုပ်ပါဦးဗျ" "ကိုစိန်ဝင်း၊ ကိုထွန်းရှိန် -ဘာလေးများ စဉ်းစားမိသေးလဲ"စသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအားလုံးကို အကူအညီ တောင်းတော့ပါပဲ။ တခါတလေဆိုရင် သူတို့နဲ့ အင်မတန် အသက်ကွာတဲ့ ကျနော့်ကိုတောင် မေးတတ်ပါတယ်။ မေးရာမှာ "ငါမင်းကို လက်ဖက်ရည် တိုက်ပါ့မယ်ကွာ" ဆိုတဲ့ ဟာသမျိုးလေးတွေလည်း ပါတတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ သူတို့အဖို့ ကာတွန်းတခုကို ရေးဆွဲတာထက် အိုင်ဒီယာရှာရတာ ပိုခက်ကြောင်း၊ အချိန်ယူရကြောင်း ညည်းတတ် ပါတယ်။
သူတို့ဟာ အိုင်ဒီယာရပြီး ဆွဲရုံပဲကျန်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဒီယာရှာရလို့ ခေါင်းသိတ်ပူသွားပြီဆိုရင် ၀င်းလိုက်ရုပ်ရှင်ရုံထိပ်က အောင်ဇေယျာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဘက်ရည် သွားသောက်ကြ ပါတယ်။ သူတို့ ပါးစပ်က ထွက်သမျှကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ကျနော်ကလည်း သူတို့နဲ့ လိုက်ရင်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာ အကျင့်ပါလာပါတယ်။ ဒါကို ကျနော့်အမေက အပြစ်မပြောပဲ "သူ့ကိုသူ ကာလသားကြီး လုပ်နေတယ်" လို့ နောက်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီလို လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ရောက်လို့ စကားပြောကြပြီဆိုရင် ကျနော်က တကယ့်ကို နားထောင်သူ သက်သက်ပါ။ တရားနာသူလို့ဆိုရင်တောင် ရမလားမသိပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ စကား ပြောရင် လူငယ်တွေကို အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လေယူလေသိမ်းရော၊ မျက်နှာအမူအရာပါ အင်မတန် အသက်ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကြည်ညိုတဲ့ လူငယ်တချို့ဟာ သူတို့ပုံစံကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် အတုခိုးကြတာတောင် တွေ့ရပါတယ်။ တခါတော့ ကိုဝင်းဖေမလာတဲ့ နေ့တနေ့မှာ သူနဲ့ကျနော် နှစ်ယောက်ထဲ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး စကားပြောကြတော့ သူ့လက်ကလေး ပြတ်တဲ့အကြောင်းကို ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီတခါမှာ သူက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရကွာ ငါတို့အိမ်က ပွဲသွားကြမလို့။ ဖိုးစိန်ပွဲလား ဘာလားမသိပါဘူး။ အဲဒါ ငါက ကျောင်းကပြန်လာတော့ လမ်းမှာ လက်ပစ်ဗုံးတလုံး ကောက်တွေ့ပါလေရော။ ငါက ငယ်သေးတော့ လက်ပစ်ဗုံးရယ်လို့ သေသေချာချာ မသိပါဘူးကွာ။ အဲဒါလေးကို လက်ထဲမှာ မြှောက်လိုက် ပြန်ဖမ်းလိုက်နဲ့ လုပ်ရင်း အိမ်ကိုပြန်လာတာ တနေရာရောက်တော့ လမ်းဘေးက တမာပင်အကြီးကြီးကို ငါက လက်လွှဲရိုက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ သစ်ပင်ခံနေလို့ပေါ့ကွာ၊ နို့မို့ရင် ဗုံးဆံတွေက ငါ့ကိုလည်း မှန်မှာ၊ သေမှာပဲ။ ငါလဲ သွေးသံရဲရဲနဲ့ လက်ကလေးကို အင်္ကျီအိပ်ထဲမှာ လူမမြင်အောင် ၀ှက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တာ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ သူတို့က ငါ့ကို နောက်ကျရကောင်းလားလို့ ဆီးဆူ ကြတာပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ငါက 'ခင်ဗျားတို့ကသာ ဆူနေ၊ ဒီမှာ ကြည့်ဗျ'လို့ ငါ့လက်ကို ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ ငါ့အမေဆိုတာ နေရာတင် မေ့လဲသွားတယ်" ဒီလိုနဲ့ သူ့အပေါ် လူတွေက ချစ်ခင်ကြင်နာချင်စရာ အချက်တချက် တိုးလာတယ် ထင်ပါရဲ့။
သူတို့တတွေ အင်မတန် ကျဉ်းကျပ်တဲ့ မဆလရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘောင်ထဲမှာ ရေးရ၊ ဆွဲရတာ အင်မတန်မှ စိတ်ပိန်စရာ ကောင်းပါတယ်။ တခါတလေ ကျနော့်မိဘတွေက "မောင်ဟိုဒင်းရေ- မင်းဒီပုံကို တဖက်လှည့်ကတွေးရင် အစိုးရက ပြသနာများ တက်မလားပဲ" ဆိုတာမျိုးပြောလို့ ဒရောသောပါး အိုင်ဒီယာအသစ်ရှာရ၊ ပြန်ရေးရတာတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ ကျနော့်အဖေက အကြောင်းမဲ့ စိုးရိမ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို နန်းတွင်း(အဲဒီတုန်းက) နမခစစ်ရုံးက မကြာခဏ ဆိုသလို နိုင်ငံခြားသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ မကျေနပ်ကြောင်း ဖုံးဆက်ပြောတာ ခံရလို့ပါ။
ကိုပေါ်နဲ့ ကိုဝင်းဖေ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တမိဝမ်းထဲက ဖွားလာသလားလို့ ထင်ရအောင် ဆရာလည်းတူ၊ ၀ါသနာလည်းတူ၊ စဉ်းစားနည်းတွေလဲ အများကြီးတူကြပါတယ်။ အသစ်ကို လက်ခံ ချင်စိတ်၊ တည်ထွင်ရဲတဲ့ သတ္တိ၊ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခေါင်းမာမှု စတာတွေကို နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အထင်အရှား တွေ့ရပါတယ်။ တခါမှာ သူဆွဲတဲ့ကာတွန်းကို ကိုယ်က လက်မှတ်ထိုး၊ ကိုယ်ရေးတဲ့ ကာတွန်းကို သူကလက်မှတ်ထိုး ဆိုတာမျိုးအထိ အဆန်းထွင်တာ မှတ်မိနေပါတယ်။
သူတို့ လူထုကို ရောက်ကာစမှာ ကာတွန်းဆွဲရင် ကလောင်နဲ့ ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဘာမှမကြာပါဘူး၊ ဘယ်ကနေ အကြံရလာတယ် မသိဘူး၊ တရုတ် ၀ါးစုတ်တန်ရဲ့ နောက်ပိုင်းက ၀ါးကို ပြားပြားချွန်ချွန်လေးဖြစ်အောင် ဓားနဲ့သပ်ပြီး ရေးကြပါတယ်။ ဆွဲထွက်လာတဲ့ လိုင်းတွေက ထူးခြားတာ အမှန်ပါ။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့တော့ သူတို့တတွေ မန္တလေးဈေးချို တိုက်တန်းပေါ်က ဦးစမူသား ကိုစုဆိုင်မှာ နစ်ပြားအကြီးကြီးနဲ့ ပယ်လီကန် (Peliacn)တံဆိပ် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ဖောင်တိန်တွေ (signature pen) တွေ့ပြီး မှိုတွေ့တဲ့အလား တယောက်တချောင်း ၀ယ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော် အဖမ်းခံရလို့ သူတို့နဲ့ ကွဲသွားတဲ့ အချိန်ထိ သူတို့ အဲဒီဖောင်တိန်ကြီးတွေနဲ့ပဲ ဆွဲနေကြတာပါ။
သူတို့ရဲ့ စာအုပ်အဖုံးပုံတွေနဲ့ အတွင်းက သရုပ်ဖော်ပုံတွေကလည်း ပြောစမှတ်ပါ။ ဗမာပြည် ပန်းချီလောကမှာ မော်ဒန်လိုင်းကို လိုက်စားသူတွေ ပိုများလာတာဟာ သူတို့ရဲ အဖုံးတွေရဲ့ ကျေးဇူးမကင်းဘူးလို့ ပြောရရင် မလွန်ဘူးထင်ပါတယ်။
အဖုံးအသစ်တခုကို သူတို့ဆွဲပြီး တိုက်ကို ယူလာပြီဆိုရင် အားလုံးက မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ အလုအယက် ကြည့်ကြတာပါ။ သူတို့ဟာတွေက ကြည့်လည်းကြည့်ချင်စရာပါ။ ၀တ္ထုလည်းဝတ္ထုမို့၊ ပုံပြင်လည်းပုံပြင်မို့၊ ကဗျာလည်းကဗျာမို့၊ အရောင်၊ လိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အားလုံးတမူထူးခြားအောင် ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော့်မျက်လုံးထဲမှာ ဒီနေ့အထိ မထွက်သေးတဲ့ စာအုပ်အဖုံးပုံတွေမှ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တချို့ကို ကျနော်တို့ တိုက်ရှေ့ခန်းမှာ မှန်ဘောင်အကြီးကြီးတွေနဲ့တောင် ထည့်ပြီး အလှချိတ် ထားပါတယ်။
ကိုပေါ်ဦးရဲ့ ထူးချွန်မှုမှာ ပါရမီဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာ ကျနော် မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုံ့လ၀ိရိယ ဘက်မှာတော့ စံထားထိုက်တဲ့ လူပါ။ သူဟာ ပန်းချီ အနုပညာမှာ အင်မတန်မှ အောက်သက်ကျေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုတိုက်မှာ သူနဲ့ ကိုဝင်းဖေတို့ ၀င်လုပ်နေကြတဲ့ ကာလမှာ အမေရိကန်ပြန်ကြားရေးရုံးကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကာတွန်းသင်တန်းကျောင်းကြီးတခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးလို့ သူတို့ ဆက်သွယ်သင်တန်း တက်ကြပါတယ်။ ဟိုက အင်မတန်စနစ်ကျတဲ့ သင်တန်းဆိုတော့ ကာတွန်းပညာရဲ့ ကကြီးခခွေးကစ သင်ရ၊ ဖြေရတာပါ။ အဲဒီလို အခြေခံတွေကို ဆွဲပြီး ပို့တော့မယ်ဆိုရင် ကိုပေါ်ဦးဟာ လက်နွှေးတဲ့သဘော အနည်းအကျဉ်းကျင့်ပြီး ပို့လိုက်တာပါပဲ။ အမြဲအမှတ်ပြည့်ရပြီး သင်တန်းပြီးတော့လည်း ထိပ်ပိုင်းက အောင်ခဲ့တာပါ။ ပန်းချီမှာ ပဏာမအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ လိုင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကိုပေါ်ဦးတို့ အောက်သက်ကျေပုံတခုကို ဥပမာပြ ပြောရရင် သူရေးခဲ့တဲ့ မြောက်မြားလှတဲ့ တကြောင်းဆွဲ လူပုံလေး (sketch portrait)တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တနေ့၊ ကျနော်တို့တိုက်က အယ်ဒီတာခန်းထဲမှာ ထိုင်လေကန်နေရင်း ကနေ သူက မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ကျနော့ကို "ဟေ့-ဖိုးသံ၊ ခဏလေးအဲဒီအတိုင်း နေစမ်းကွာ၊ ငါတချက် လောက်ခြစ်လိုက်ချင်လို့"ဆိုပြီး ဘုတ်ပြားပေါ် စာရွက်တရွက်ညှပ်ပြီး သူ့ ပယ်လီကင်ဖောင်တိန် နဲ့ ခြစ်လိုက်တာ ငါးမိနစ်တောင်မကြာဘူးထင်ပါရဲ့ ဘေးကကြည့်နေသူတွေ စုတ်သပ်ရတဲ့ ပုံတပုံ ထွက် လာတာပါပဲ။ ကျနော်လည်း အဲဒီပုံလေးကို နောက်နေ့မှာပဲ မှန်ဘောင်ပြေးသွင်းပြီး ကျနော့အခန်းထဲမှာ ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ သူအဲဒီလို ရေးပေးခဲ့တဲ့ ပုံပေါင်း ဘယ်နှစ်ရာရှိမလဲ မပြောတတ်ပါ။ ဘယ်သူ မဆို သူ့ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး တခုတ်တရ သိမ်းထားကြပါတယ်။
ကျနော် အထက်မှာရေးခဲ့သလိုပဲ ကိုပေါ်ဦးဟာ အင်မတန်မှ တီထွင်လိုသူ၊ တီထွင်ရဲသူ၊ တီထွင်ခဲ့သူ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ လူတွေမှာ တီထွင်လိုစိတ်ရှိပေမဲ့ သတ္တိရှိချင်မှ ရှိတာပါ။ ဒီနှစ်ခုရှိအုန်းတော့ လည်း လက်တွေ့လုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ နောက်တကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါ်ဦးကတော့ ပန်းချီကားတွေ ရောင်းရတာ မရောင်းရတာ အပထား၊ တီထွင်စမ်းကြည့်ပြီး ပြပွဲတင်တာလည်းတင်၊ မတင်တာနဲ့ တင်ပြီးမရောင်းရတဲ့ဟာတွေကို အိမ်မှာချိတ်ရင် ချိတ်ထား၊ ပုံချင်ပုံထားလိုက်တာပဲ။ ဘယ်လိုပဲ အဖြေထွက်ထွက်၊ သူ့ရဲ့ တီထွင်လိုစိတ်ကိုတော့ နောက်တွန့်မသွားစေခဲ့ပါဘူး။ ကျနော် လက်လှမ်းမီသ လောက် သူ့ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ ဘယ်လိုပဲထွင်ထွင်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဒြပ်မဲ့(abstract) ဆန်ဆန်၊ နောက်ဆုံးကျတော့ မြန်မာ့အမျိုးသား စရိုက်ကိုပဲ ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ သူ့ စိတ်ရင်း၊ စရိုက်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပါတ်သက်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆရာမြို့မငြိမ်းရဲ့ သားမက်ဖြစ်ကြောင်း အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုတဲ့ ကိုပေါ်ဦးရဲ့ အလေ့အကျင့် တခုက ပန်းချီရေးတဲ့ အခါဖြစ်စေ၊ ကာတွန်းဆွဲတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ သောက်လက်စ ဆေးပေါ့လိပ်လေးက မီးခိုးအတအူအူ သူ့ပါးစပ်က သီချင်းလေးတလွင်လွင်နဲ့ အလုပ်လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဓမ္မတာပဲ သူအများဆုံး ဆိုညည်းးလေ့ ရှိတာတွေကတော့ ဆရာငြိမ်းသီချင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေလည်း အနောက်တိုင်းတီးလုံးတွေကို ပစပ်ဆိုင်းတီးနေတတ်ပါတယ်။ သူဟာ ကာတွန်းဆွဲရင် ဘယ်လောက် ဆူညံနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဆို ဆွဲလို့ရပြီး ပန်းချီဆွဲရင်တော့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတဲ့ ကာလတုန်းကဆိုရင် ညသန်းခေါင် အိမ်သားတွေ အိပ်ကုန်တော့မှ တယောက်ထဲ ရေးတတ်ပါတယ်။
သူ့ပါးစပ်က လူတယောက်အကြောင်း နစ်နစ်နာနာ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ပြောတာရယ်လို့ တခါမှ မကြားဘူးသလို ကြီးငယ်မရွေး လူတိုင်းနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံတတ်တာကို သူနဲ့ပေါင်းဖူးသူတိုင်း သတိမပြုပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ တီထွင်မှုတွေ အများကြီးလုပ်သူ၊ အောင်မြင်သူဆိုတာ အယူအဆမတူသူ၊ မနာလို အမုန်းပွါးသူတွေ တွေ့ရတတ်တာချည်းပါပဲ။ သူလဲချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ နို့ပေမယ့် အဲဒီလိုလူတွေကို သူက ဒေါသအမျက်နဲ့ ကွယ်ရာမှာဖြစ်စေ၊ ရှေ့မှာဖြစ်စေ ပြောဆိုတာရယ်လို့ ကျနော်ဖြင့် တခါမှ မကြားရဖူးပါဘူး။ သူ့မှာ နိုင်ငံရေးအစွဲအလန်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူစွဲလန်း ယုံကြည်တာ ဘာသာရေး သက်သက်ပါ။
ကျနော်ထောင်ထဲရောက်တော့ အာဏာပိုင်တွေက သတင်းစာတွေကို ထောင်ထဲ သွင်းခွင့်မပေးပါ ဘူး။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ အိမ်သာသုံးဖို့ရတဲ့ သတင်းစာတွေကို စု၊ ကော်နဲ့သုတ် ပြန်ဆက်ပြီး လှည့်ဖတ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလို ဖတ်ကြတဲ့အခါမှာ တခါတလေ ကိုယ့်အိမ်ကထုတ်တဲ့ သတင်းစာလည်း ဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီလို ဖတ်ရလို့ အိမ်ကိုသတိရစေတဲ့အထဲမှာ ကိုပေါ်ဦးရဲ့ 'သူတော်' ကာတွန်းလဲ ပါပါတယ်။ သူတော်ဆိုတာက ဒီကာတွန်းနဲ့ နာမည်ရ၊ သူ့မှတ်ပုံတင်တဆိပ် လိုဖြစ်နေတဲ့ သတင်းစာမှာ နေ့စဉ်ပါတဲ့ ကာတွန်းကဏ္ဍလေးတခုပါ။
ကိုပေါ်ဦးဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးအတွက် အတိုဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံး အချက်ကို ပြောရရင် ရိုးသားခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်း နဲ့ လုံ့လ၀ရိယရှိခြင်းတို့က ထုဆစ်ပုံသွင်းလိုက်တဲ့ စံပြလူသား တဦးဖြစ်တယ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်။
Posted by Maung Aye Win at 10:46 PM No comments:
ဟုတ်နေပါ့လား ကိုယ့်ဖာသာ။ ။
"ထမီလေးတထည်" * လောက်..ဘောင်မ၀င်ဘူ့။
*နုနုရည် (အင်းဝ) ရဲ့ ၀တ္ထု
Posted by Maung Aye Win at 6:10 PM No comments:
ကျွန်မ အလုပ်မှ အနားယူလိုက်တဲ့ အခါမှာ အရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့မြင်း ဇက်ကြိုးသပ်လိုက်သလို ရုတ်တရက် တုံ့ခနဲဖြစ်သွားပြီး တွေဝေနေမိတယ်။ မနက်လမ်းလျှောက်က အပြန် အိပ်လိုက်၊ နေ့လည်ထမင်းစားပြီး အိပ်လိုက်နဲ့၊ တီဗွီရှေ့မှာ အချိန်ကုန်နေမိတယ်။ ကျွန်မတသက်မှာ အလုပ်မှာရှိတဲ့ အချိန်နဲ့ အိမ်မှာနေတဲ့အချိန် တွက်ဆလိုက်ရင် အလုပ်မှာနေတဲ့အချိန်က များပါလိမ့်မယ်။ နံနက် စောစော အလုပ်ကိုရောက်တာနဲ့ သင်ရမယ့် သင်ခန်းစာအတွက် စာအုပ်တွေထဲမှာ မျက်နှာဝှက်ပြီး ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
ရုံးကသယ်လာတဲ့ ကျွန်မစုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို အိမ်က ခုံတွေပေါ်မှာ၊ စားပွဲပေါ်မှာတင် ထားမိတယ်။ ဒီလိုမြင်ရတိုင်း စိတ်မချမ်းသာဘူး။ ကျွန်မ အင်မတန် မြတ်နိုးတဲ့ စာအုပ်တွေ အသုံးချဖို့ မလိုတော့ဘူးလား?
၃ လ လောက်ကြာမှ စိတ်ကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး စနစ်တကျ နေရာထားမိတယ်။ အချိန်ရလာတော့ ကျွန်မဟာ အနှောင်အဖွဲ့ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ ဘ၀ကို ကျေနပ်လာမိတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အရသာကို စတင်ခံစားတတ်လာတယ်။
ကျွန်မ အိပ်ရာဘေးက စာအုပ်စင်မှာ ကျွန်မ အများဆုံးဖတ်တတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထားပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ ကဗျာစာအုပ်တွေပါ။ ကျွန်မ ခဏခဏ ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ကိုဝက်ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေပါ။ ကျွန်မခရီးသွားတိုင်း ဖတ်ဖို့ အချိန်ရတာမို့ သယ်သွားပြီး လေယဉ်ကွင်းမှာ စောင့်ရ တဲ့အချိန်၊ လေယဉ်ပေါ်မှာ၊ ရထားပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ အမြဲဖတ်ပါတယ်။
သူ့မိဘအကြောင်း၊ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ မောင်နှမတွေ ဆော့ကစားကြတာတွေ၊ သူ့နှမနဲ့ ညီလေးကို ကျွန်မ ကောင်းစွာ သိနေတာမို့ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က မောင်နှမတွေ ချစ်သလို ပျော်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ကို သတိရစေတဲ့အတွက် ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့မိဘတွေက သားအကြီးတွေနဲ့ ကြာရှည်စွာ မနေခဲ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေလို ကျွန်မရဲ့ မိဘကိုချစ်တဲ့ ၀မ်းမနာ သားသမီးတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိဘကို စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့ အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ ကိုဝက်နဲ့ဦးစိန်ဝင်းကို ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေက အခင်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အမေ့သမီး တွေထဲကတော့ မမခင်ဦးကို ကျွန်မ အချစ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မောင်လေးရေးတဲ့ အမေ စိမ်းလန်းအေးမှာ နေရတဲ့ဘ၀ ဆောင်းပါးလေးကို ကျွန်မ မကြာခဏ ဖတ်မိတယ်။ အမေလမ်းလျှောက်တဲ့ အိမ်တော်လမ်းကလေးမှာ သူပြေးရင်း အမေနဲ့သူ အတူနေရတဲ့ ဘ၀ကို ချယ်မှုန်းထားတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမေဟာ အရင်က သူလျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကလေးကို မလျှောက်နိုင်တော့တာ ၃ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ၂ ကြိမ်ဆေးရုံမှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရပြီး၊ ပါရဂူများရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် အမေအသက် ရှည်နေတာပါ။ နွေရာသီရောက်တဲ့အချိန်တိုင်း အစားပျက်ပြီး အစားမ၀င်တဲ့အတွက် နှစ်စဉ် စိမ်းလန်းအေးကို ရောက်လာပြီး၊ သီတင်းကျွတ်မှ အိမ်ကို ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ လမ်းလျှောက်ခဲ့တာမို့ အမေ ဒီလမ်းကလေးကို စွဲလန်းရှာပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခါတလေ ကားပေါ်တင်ပြီး ဒီလမ်းကလေးကို သူလျှောက်တဲ့အတိုင်း မောင်းပြီး လိုက်ပြရပါတယ်။ အမေပျော်အောင် ကျွန်မ စိမ်းလန်းအေးကို ရောက်တိုင်း လုပ်နေကျ အလုပ်ပါ။
အမေ အိပ်ရာကနိုးရင် စလုပ်တာကတော့ ခြံထဲက မြတ်လေးပင်လေးဆီ မြေးမလေးနဲ့ သွားပြီး ပန်းသွားခူးတာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်သီပြီး ဘုရားမှာ ကပ်ပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုးပုတီးစိပ်တဲ့အခါမှာ ပုတီးကို ကိုယ်တိုင်ကြိုးထိုးပြီး ပို့ထားတဲ့သားတွေ ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီး အကုံးတိုင်းစိပ်ပါတယ်။
ညက အိပ်ရေးဝလို့ အစာဝင်ရင်ဖြင့် နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ နံနက်ခင်း ခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက် ပါတယ်။ အလှချင်းပြိုင်နေတဲ့ နှင်းဆီတွေထဲမှာ အပွင့်သိပ်ကြီးတဲ့ ပန်းရောင် South Sea ကို အကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့။ ပန်းပွင့်တိုင်းကို အမေသိနေတယ်။ နောက်ပေါ်တဲ့ Athena နဲ့ Princess Monaco ဆိုတဲ့ နှင်းဆိတွေကို အမေက လှလွန်းလို့တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနှစ် ဆောင်းဝင်ရင် ခြံကို ပြင်ကြမယ်။ အမေကြိုက်တဲ့ အလှဆုံး နှင်းဆီတွေကို အများဆုံး စိုက်ကြမယ်။
သားသမီးတွေ၊ မြေးတွေက အလုပ်တွေ၊ စီးပွါးရေးတွေ၊ ကျောင်းတွေကြောင့် တခါတရံ အမေ့နားမှာ မရှိတတ်ဘူး။ အနီးကပ်ဆုံး စောင့်ရှောက်နေတာကတော့ ကိုစိုးမြင့်ပါပဲ။ ညတိုင်း အမေ့တရား ထိုင်ဖက်ပါ။ အမေ့နားမှာ အမြဲရှိပြီး အဖော်လုပ်ပေးနေတာကတော့ သားအငယ်ဆုံး ကိုကျော်သီဟပါပဲ။ သူ့ကြောင့် အမေဟာ ဘော်လုံးပွဲတွေ ကြည့်တတ်လာပြီး Owen တို့ Beckham တို့ကို ကောင်းစွာ သိပါတယ်။
အမေဟာ သူ့ပန်းတွေကို ပြတင်းကနေ လှမ်းကြည့်နေရတယ်။ ခြံရဲ့အလယ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ အမေ့အကြိုက် ခတ္တာပန်းတွေကတော့ ခူးလို့ မနိုင်နိုင်အောင် ဧပြီနဲ့မေလမှာ ပွင့်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျရင် အမေ့ဘုရားစင်မှာ ခတ္တာပန်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေပြီး ဒီပန်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အဖေ့ကို သတိရပြီး ခတ္တတွေပွင့်ပြီလို့ အမေ့ရင်ထဲမှာ ပြောနေမှာပါပဲ။
မိုးကျတာနဲ့ မြေကြီးထဲက ပြူထွက်လာတဲ့ နှင်းပန်းလေးတွေဟာ အမေခူးနေကျ ပန်းလေးတွေပါ။ တခါတရံ ဆီမီးတောက် ပန်းလေးတွေ တောင်သားတွေက အမေဘုရားတင်ဖို့ ခူးလာကြပါတယ်။ မှန်ပြူတင်းက ပန်းလေးတွေအပြင် အမေကြည့်တာတွေကတော့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ရာသီဥတုပါပဲ။ နေသာရင် ဗွတ်ကလုံနဲ့ သပိတ်လွယ်တို့ တေးချင်းဆိုကြပြီး၊ ခြံဝမှာမြင်နေတဲ့ ထင်းရူးပင်တွေ ငြိမ်နေတဲ့အခါ၊ လေတိုက်နေလို့ ယိမ်းထိုးနေတဲ့အခါ၊ မိုးစက်တေါ မိုးနှင်းတွေ မှိုင်းတွေ၊ ယခုလို မိုးကုန် တော့မယ့် အချိန်မှာ တခါတရံ နံနက်ခင်းမှာ နှင်းတွေဝေတတ်တာမို့ အမေဟာ သူ့နဘေးမှာမရှိတဲ့ သားသမီးတွေကို လွမ်းပါလိမ့်မယ်။
သားသမီးတွေ စုံရင်တော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ စပါယ်ရှယ်လုပ်ထားတဲ့ ဟင်းတွေကို မြိန်ယှက်စွာ စားတတ်ပါတယ်။ ထမင်းစားရင် ကြာတတ်တာမို့ သမီးတွေက စောင့်စားရင်း စားစေချင်တာကလေးကို ထည့်ပေးရင်း ၀င်အောင်ကျွေးကြပါတယ်။ နေ့လည်အိပ်ရင်တော့ ကျွန်မ အဖော်လုပ်ရပါတယ်။ အမေ့ လက်ကလေးနဲ့ ခြေဖ၀ါးလေးတွေဟာ အမြဲအေးနေတာမို့ ဆုပ်ပေးထားရင်း အဖေ့ကို အထူးသတိရမိ ပါတယ်။ အဖေကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ ရုတ်တရက် နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ဆုံးတာမို့ အဖေ့ကို တာရှည်ပြုစုခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။ ဆုံးခါနီး အချိန်တွေအကြောင်း စဉ်းစားမိရင် ကျွန်မခေါင်းထဲက ချွေးတွေ ထွက်တတ်ပါသေးတယ်၊
ကျွန်မငယ်ငယ်က ရန်ကုန်မှာကျောင်းနေတော့ အဖေ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ နေရပါတယ်။ မိဘလို စောင့်ရှောက်တာမို့ အဖေအမေလို့ခေါ်ပြီး သူတို့သမီးတွေဟာ ကျွန်မတို့နဲ့ ညီအစ်မအရင်းတွေလို ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကအဖေ မဆုံးခင် ၉နှစ် ၁၀နှစ် အိပ်ရာထဲမှာ လေဖြတ်ပြီး လဲတော့ သမီးတွေနဲ့ အမေက ပြုစုကြတယ်။ ကျွန်မ ရန်ကုန်ရောက်တိုင်း သွားပြီးကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်မလာရင် သိတ်ပြီး ၀မ်းသာရှာတယ်။ သမီးတွေနဲ့ အမေက သိပ်ဂရုစိုက်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်တာ မြင်ရတော့ ကျွန်မ အဖေဟာ သူ့လောက် အသက်မရှည်ခဲ့တာကို တွေးမိပြီး အဖေရှိရင် ကျွန်မလည်း ဒီလိုပြုစုမှာပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
အမေဟာ အသက်ကြီးလာတော့ အရင်ကလို စာကိုတွင်အောင် မရေးနိုင်တော့ပါဘူး။ မေ့ကုန်ပြီလို့ လည်း ပြောတတ်တယ်။ ကျွန်မသား ဘိုဘိုကို အဖွားဘာရေးရင် ကောင်းမလဲတဲ့။ မျက်စိက စာ သိတ်မဖတ်နိုင်တော့ သူသိချင်တာတွေကို ပြောပြခိုင်းပါတယ်။ Sars အကြောင်း ပြောပြစမ်းပါလို့လဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်က ဆရာကြီးဦးကိုလေး(ဇေယျာမောင်) ကွယ်လွန်တော့ သူ့အကြောင်းအမှတ်တရ ရေးတဲ့ဆောင်းပါးမှာ အချက်အလက်တွေက ပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်တာမို့ ဆရာကြီးဦးကိုလေးနဲ့မမခင်တို့ဘ၀ကို ချယ်မှုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်း ခြံဝမှာရှိတဲ့ ပဒိုင်းရောင်စုံကို အမေက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အနီးကပ် ကြည့်တတ်ပါတယ်။ လမ်းကူးပြီး အပင်နား အမြဲသွားကြည့်ပြီး နောက်ထပ်အပင်တွေ ထပ်စိုက်ပါဦးလို့ မှာတတ်တယ်။ ဒီပန်းတွေဟာ ညနေစောင်းကစပြီး တညလုံး အမွှေးတိုင်လိုမွှေးတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပန်းတွေပါပဲ။
ခုလို မိုးနှောင်းတဲ့အခါမှာ နွေဦးမှာလှဖို့အတွက် ဥယျာဉ်မှူး ဦးသိန်းထွန်းက ခြံကိုစပြင်နေပါပြီ။
အမေကြိုက်တဲ့ South Seas နှင်းဆီတွေကို အ၀င်ဝမှာ အခင်းတွေနဲ့ စိုက်မှာဖြစ်ပြီး သိတ်မွှေးတဲ့ ပဲပန်းနှင့် Marie Gold ပန်းတွေ ရောင်စုံ ပွင့်စေပါမယ်။
အမေဟာ အဖေနဲ့အကြောင်းပါတော့ သူတို့ဘ၀ဟာ ဖဲမွေ့ယာမဟုတ်ပဲ ဆူးခင်းလမ်းကို လျှောက်ခဲ့ ရသတဲ့။ ဒီလမ်းကို ကျွန်မတို့ အတူတူလျှောက်ခဲ့ရတာမို့ ယခုလို စိမ်းလန်းအေးမှာ နေရတဲ့ အမေ့ဘ၀ ကို ချမ်းမြေ့စေချင်တယ်။
by Pho Than Jong
[၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ 'လူထုဒေါ်အမာ ၈၈-နှစ်မြောက်မွေးနေ့' အထိမ်းအမှတ်ထုတ်-မာယာမဂ္ဂဇင်း-မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်]
One day, Ko Min Zin,adeputy editor of the Irrawaddy magazine, asked me some questions about my mother and I answered his questions as below. Though part of the answers were included in his article, I think there are still some important points that will attract readers' interest.
Here are the answers to your questions. If there is anything you would like to know more or make clear, please don't hesitate. To tell you the truth, I am not very much at ease to praise my own mother. There'saBurmese proverb that my mother often quotes: " The neighbourhood will acknowledge if your daughter is really beautiful." So, I don't think that it is the task of the children to write about them. Anyway, here they are.
1. How would you describe your mother asamother not asajournalist or social critic?
A. She'sagood mother just like any other typical Burmese, Buddhist mothers. She loves Burmese food and can make good dishes herself. She loves planting flowers and likes to visit markets, especially those in the countryside. She enjoys seeing Disney cartoons, comedies, as well as Hollywood films that my uncle(her younger brother)recommended. Once she went to see the horror film "Dracula" on my (elder) brother's insistence and admitted laughingly that she was very scared when she came back. I mean to say that she's justahuman being.
As my parents were always occupied with their jobs they had very little time to spend with their children or attend to their daily life and needs. We were left in the hands of an aunt,adistant relative of my mom. When educating us my mom always emphasised cherishing the traditional values of our nation and moral intergrity. Knowing that we were starting to get involved in politics, she once toldme, "No matter what, asastudent, one should try to excel in studies also. Just look at Ko Aung San and Ko Ba Hein. They are not only known for thier political merits, they are known for their perfomance in their studies also. " This is the way she used to tell us. She rarely say "don't" "must" or mustn't." Rather, she pointed out exemplary figures. There are three brothers in our family and no one of us drink or smoke. This is not because they told us not to , but rather because through their own deeds they made us convinced that these things are not good.
She rarely beats us. As far as I can remember, she once beat us when my elder brother, my elder sister and I went for "begging" during one Dazaungdaing Thieves' Festival. I think I was about ten at the time. My brother went with his friends and my sister and I went with the children of our age from our neighbourhood. As we were young, we could'n't go very far, we only went to some of our relatives and neighbours. Evidently, the news reached her ears immediately and she gave us some thrashing when we arrived home.
She never told her children to read Marxist books(nor oppose doing). Instead, she recommended us to read various kinds of books that she thought worth reading. Edgar Snow's books, Autobiography of Charlie Chaplin, The Silent Spring (an early book about environment question) and Decline and Fall of the Roman Empire were some among them. As for the Burmese books, there were too many to mention. The list includes classical literature, Thakin Kodawhmaing's works and Khitsan Literature. She also mentioned books like Thakhin Ba Hein's "The Capitalist World" and Tin Moe's "The Lantern" as very good and we should read.
2. Would you recall the most unforgetable moment you spending with your Mom?
It's difficult to say at this age, because (I think) I have become more and more less sentimental or emotional, than when I was young. However, I should say, listening to what she told us about our forefathers or their old days was the most enjoyable and unforgettable moments. That kind of moment was not very common. As I have said above, my parents were always busy. I think I had more chances than other children at the time, because when I was sacked from the Mandalay University for taking part in student activities, my parents arranged me some deskwork at our newspaper staff and during the hot Mandalay afternoons, when she had time, she used to recall these and told me.
I must also say that I neither regretted nor blame my parents for spending less time with us. On the countrary, I believe that, even when I was young, I know they were working for the good of others and their devoted working style became my model, as I grow up.
3. Nearly all of your siblings have been involved in Burmese politics as committed dissidents/revolutionaries have your parent (particulary your Mom in this context) had any disapproval against your involvement? How did they express their worry for you siblings since you all have paidalot for what you believe? Have you ever heard any complaint from your Mom regarding to your elder brother's (U Soe Win's) death?
My parents never say 'no' to what we do with our beliefs. They only told us to be careful when they learned something about the government agents' knowledge or plans. They never said that you should believe in communism, rather, they somtimes told us how the leaders of the communist party and other patriotic personages at the time had made enormous contributions and sacrifices for the nation. Incidentally, as my father was arrested again and again by the government and the publication of our newspaper was disrupted often, seeds of hatred for the government took root in my mind since I was very young.
My parents, both devoted Buddhists, never compelled me to be as devoted as they are. We were sent to Roman Catholic Schools, but my parents made us convinced that we should not become Christians, and that they did, not by saying directly, but very tactfully. They have respect for our beliefs and our ability to decide for ourselves. It's not their style to interfere in our political convictions. Perhaps this is because they think what are we doing is right. Of course, they instructed us about moral and manners when we were young.
No doubt, they are very worried about us taking part in very dangerous and risky activities. But they rarely express these feelings on their face or in their words. I found their faces very calm and serene when they came and arrest me on two occasions (I managed to escape at the second time) and they made me brave and less worried during the consequent events. Once, when I went to play football at Myaung,atown fifty miles southwest of Mandalay on the Irrawaddy River, we came back very late. Perhaps it was one o' clock after midnight. When the car carrying stopped infront of my home, I found both of them standing infront of our house, worried! They had prayer beads in their hands.
When I got home after my release from gaol, they told me the following episode: just aboutamonth before my release. U Ne Win, who was on summer vacation in Maymyo, asked my parents to see him. He told them, " Asafather myself, I can understand your feelings about your son in prison. But they told me he was very stubborn also. Nevertheless, please go and see Brig, Gen Tin Oo (The M.I.S. chief) in Rangoon and he will arrange for his release." Thus , I was released from the Insein Gaol. My mother added , "We often met with people like U Ne Win and other leaders of the government. However, we never utteredaword asking them to release you. Of course, we want you to come out as soon as possible but we know we shouldn't do that the expense of your dignity." That made me very proud of them.
As for my brother's case, both of them said nothing to me. Once, after my release from gaol, I gotaletter fromaCPB leader for my mom. In that letter he explained the case of my brother and appologised to my parents. I handed it over to my mom and I saw tears falling from her eyes after reading it. She said, "I and your father had never said anything between us about this matter. We just pretended not to have heard anything." After that I didn't try to talk about that matter till now.
4. Recently, we have heard that Sayamagyi was sick and hospitalized? Since you haven't seen your Mom foralong time, how such news worry you?
Certainly, I'm very worried, worried than anything. My inability to be present at the bedside of my dad when he was about to leave this world has been haunting me all along. One of my greatest wishes as an ordinary man is to haveachance to pay respects (kadaw)to my dad's tomb.
5. Daw Ahmar has been highly respected by Burmese people. Many people even compare her with Thakin Kodaw Hmaing. Even though she is getting old, she still writes prolifically with well-intention ( cetana). How would you see your Mom not as your mother but asawomen from the angle of your social value and political belief.
I'm not interested in comparing her with Thakhin Kodaw Hmaing. To me it's justakind of storm inateacup that would lead nowhere. My Mom always express her deep respect for Sayagyi Thakhin Kodaw Hmaing for many merits and I'm sure she won't like comparing her to the person she respects so much.
She never attack or react against anyone for personal grudges. Both my parents tried to be balanced when they tried to judge other people.
My mother has very remarkable courage that she inherited from her mother. She never sulks, grumbles or murmurs when she has to encounter all kinds of difficulties and threats. She used to express dislike for traitors and cowards.
Her, as well as her husband's, attitude towards young people is made up not only of cetena, but also of recognition their capability and potential. They used to be very humble when talking with young people. Even with me, they never treated me patronizingly. For instance, when she was writing her prize-winning book about famous people from music and drama circles, " Artists who are Loved by Masses", she asked me one day, " My son, I know nothing about music and to handleacharacter like Myoma Nyein is simply beyond my capacity. Can you tell me some facts that may throw light upon the talents of this genius?" In fact, through I was about eighteen at the time, I was alsoaphilistine in this field. She often said, " My son, I am not good at choosing names for books. Would you mind choosing one for me?" The titles of some of her books were chosen by me.
She believes in the might of our people. She believes in their future and that one should work for, and if needed, make sacrifices for this cause.
She reached this height because she has been standing firm with the people of our nation through thick and thin. She never bargains her principles for anything.
Posted by Maung Aye Win at 9:48 AM No comments:
My Mum by Pho Than Jong